Saka saka mainty | Noti saka
Saka saka mainty
Monica sanchez | | miteraka
Ny saka mainty, ankahalaina taloha, dia ankafizin'ny olona maro ankehitriny, anisan'izany ny tenako. Ny volony malefaka sy mamiratra, ny fijerin'izy ireo mahaliana ary ny toetrany manokana dia mahatonga azy ireo ho mpinamana tsy mampino. Fa firazanana inona no fianianan'izy ireo?
Raha te hahafantatra ianao hoe inona ny karazana saka mainty, dia hilaza aminao izahay ao Noti Gatos. Aza adino izany 🙂.
1 Ny saka miteraka volo mainty
1.1 Saka Shorthair Amerikanina
1.2 Saka Angora Tiorka
1.4 Saka iraisana eropeana
1.6 Saka persiana
2 Inona no mahasamihafa ny saka mainty sy ny Bombay?
Ny saka miteraka volo mainty
Ny mainty dia loko iray izay mahasarika ny sain'ny olona matetika, saingy indrisy fa ampifandraisina amin'ny ratsy izy io. Ny fanehoan-kevitra toy ny "hitako ny zava-drehetra amin'ny mainty" dia milaza amintsika fa mandalo fotoana tena ratsy eo amin'ny fiainany ity olona ity. Fa, mitovy amin'ny saka mainty ve izany? Ratsy vintana ve ireo biby ireo?
Ny fiainana miaraka amin'ny iray amin'izy ireo dia manana traikefa mahatalanjona sy mahafinaritra. Ny fahalalana ny fitiavana madio. Afaka mikomy izy ireo mandritra ny fahatanorany, saingy saka inona no tsy amin'izao taona izao? Tsy ho sasatra mamerina aho fa tsy loko ilay loko, fa nihaona tamina panther kely vitsivitsy aho, raha ny tena izy dia miaina miaraka amin'ny iray aho izao, ary ny marina dia manana toetra manokana izy ireo. Raha vao olon-dehibe izy ireo matetika dia milamina, milamina, be fitiavana ary mahafinaritra.
Noho izany, ny karazana saka mainty izay tokony ho fantatrao dia:
Saka Shorthair Amerikanina
El saka amerikana shorthair Karazana teratany Etazonia izy io. Ny vatany dia manana halehibe antonony, rakotra palitao fohy, matevina sy sarotra tohina. izay mety misy loko: fotsy, manga, mena, krema, brindle, ... ary koa mainty, milanja 6 ka hatramin'ny 8 kilao.
Saka Angora Tiorka
El Angora io dia iray amin'ireo karazana saka tranainy indrindra. Efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX ireo aristokraty no te-hiara-mipetraka amin'ny iray ao an-tranony, satria tamin'izany fotoana izany dia saka iray lava volo fotsiny no fantatr'izy ireo. Milanja 3 ka hatramin'ny 5 kilao ny lanjany, ary na dia mety samy hafa loko aza ny karazany (fotsy, volomparasy, boribory sns), dia mety mainty ihany koa.
Ny saka Bombay no karazana saka mainty tsy fantatra. Ny vatany dia arovan'ny sosona volo izay mainty ihany ny loko, ary eo an-dohany dia manana maso roa boribory tsara sy misaraka tsara izy.. Hozatra izy io, matevina ary salantsalany, milanja 3 ka hatramin'ny 7 kilao ny lanjany, izy ireo no vavy kely indrindra. Te hahafantatra bebe kokoa momba an'io karazany io ve ianao? kitiho eto.
Saka iraisana eropeana
Benji saka ko
El saka iraisana eropeana mety misy loko io: fotsy, volomboasary, boribory, bicolor, ... ary mazava ho azy mainty. Hatramin'ny fotoana maha alika azy dia mandra-pahatongan'ny fahanterany dia manana volo malefaka sy mamiratra izy, miloko mainty mahery ary tena salama, saingy rehefa antitra izy dia very ny hamirapiratry ny volony.. Mora ny mahita volo fotsy; Ohatra, ny saka Benji saka misy ahy amin'ny vozony, manodidina ny tendany, ary ny saka Bicho dia toa teraka volondavenona 🙂, satria misy amin'ny lamosiny sy tendany. Mety milanja eo anelanelan'ny 2,5 sy 7kg izy, ny vavy kely kokoa noho ny lahy.
Ny Maine Coon dia saka antonony, hozatra, milanja 3,6 ka hatramin'ny 8,2 kilao, ny vavy kely kokoa. Ny lokony dia mety miovaova be, fa ny tonony volontsôkôla dia miavaka ary mainty mihitsy aza. Inoana fa avy any Maine, any Etazonia izy io, izay nahatongavan'ireo saka Angora avy any Torkia avy amin'ny andriambavilanin'i Austria antsoina hoe Marie Antoinette, izay afa-nandositra ny olana nanjo an'i Frantsa tamin'ny faramparan'ny taona 1700.
El Saka persiana io dia iray amin'ireo karazany malaza indrindra. Ny lohany fisaka sy ny volony lava sy malefaka no nahatonga azy ho biby iray tian'ny olona rehetra, satria tena mampiavaka azy ny toetrany. Mipetraka tsara amin'ny fisaka izy, ary mangina dia tsy mila manao fanatanjahan-tena be loatra, ohatra, sparkler. Izy io koa dia mety misy loko isan-karazany, ao anatin'izany ny mainty, ary milanja eo anelanelan'ny 3,5 sy 7kg.
Inona no mahasamihafa ny saka mainty sy ny Bombay?
Ny saka eoropeana mainty sy ny Bombay dia itovizany, saingy misy fahasamihafana tena miavaka:
loharanoNa dia tsy fantatra aza androany hoe oviana ny saka mainty volo mainty no niseho voalohany, ny karazany Bombay dia vokatry ny fiampitana teo anelanelan'ny saka birmanina birma sy ny saka amerikana Shorthair mainty volo tamin'ny taona 1950.
ColorNa dia mainty aza ny roa, dia hanana volo fotsy foana ny eropeana iraisana, ary misy pentina fotsy mihitsy aza. Bombay dia mainty hoditra hatramin'ny nahaterahany 🙂.
Ary amin'izany no nahavitana antsika. Manantena izahay fa nahaliana anao ny fahalalana ireo karazana saka saka mainty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Saka saka mainty
Mahatakatra ny fitenin'olombelona ve ny saka?
Maninona ny saka no mihodinkodina raha mahita ahy